Home Wararka Casharkii ugu Horreeyey Waa bixiyey Afawerki: Farmajo Baydhabo Qabo!!
Casharkii ugu Horreeyey Waa bixiyey Afawerki: Farmajo Baydhabo Qabo!!
MW Erateriya ayaa saaka soo gaaray Xamar isagoo oo u yimid inuu MW Farmajo baro sida loo caburin karo shacbiga Somaliyeed., waxaana horaba laga bilaabay Magalada Baydhabo. Afawerki oo ah ma naxe kalitaliye ah ayaa waxaa uu u yimid inuu halkaan kaga Saxeexo Farmajo dhowr heshiis oo lagu gumeynayo Somaliya. Afawerki hawshii uu u yimid mar horaba waa bilaabatay waxaa saaka ay ciidanka Itoobiya ee jooga Baydhabo qafaasheen Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ahaa musharraxa ugu cadcad musharixiinta u taagan madaxweynenimada K/Galbeed.
Afawerki waxaa uu saaka saxeexayaa in uu mushaar iyo awood meel u saaro 5000 oo Erateriyaan ah, kuwasoo ah ciidan u tababaran caburinta iyo fidinta kalitalisnimada. Ciidankaa oo la keenayo gobollada Banadir iyo Sh/hoose waxaa qorshuhu yahay ina loo isticmaali doono caburinta, dilka iyo cadaadinta xildhibaanada, siyaasiyiinta, ganacsata yo shacbiga haddii ay isku dayaan inay ka gilgishaan xukunka kalitalisnimo ee dhidibada hadda loo aasi rabo ee MW Farmajo. Isla saakaba waxaa la baray inuu Baydhabo ka xero dunida inteeda kale si loo caburiyo dadkaas.
Waxaa marar badan la yaabaa marka dad aan is lahaa waxay leeyihiin meel xadeysa oo haddi la gaaro waa ka joogsanayaan waxayna difaacayaan dalka, hasa yeeshee wali waxaan arkaa iyagoo indha la’aan difaaca Farmajo oo muujiyey inuu yahay ma naxe isu diyaarinaya inuu noqdo Kalitaliye.
Bal qiyas xildhibaan, siyaasi, ganacsade, muwadin 5000 oo Erateriyaan ah oo u tababaran inay ciddiyaha, xiniinyaha iyo naasaha naga guraan oo aan kaa naxayn kana amar qaata Fahad Yasiin, Xasan Cali iyo Farmajo oo dalka la keeno. Haddaba maanta ayaa fudud inaad xildhibaan Codkaaga wax kaga qabatid oo aad horjoogsatid, haddii kale berri ayaad ama gacatooda ku bixi oo ku dili ama dhiig ayaad ku bixin dagaalkii Itoobiyaanka 2006 ayaa caana noqon doona.
Somaliya oo ah dimoqradiyad curdun ah oo la dhoodhoobayo waa ku ceeb inuu Afawerki oo ah Dambiile Xuquuqul insaanka inuu dalka yimaada oo madaxweynaha Somaliya uu xabadaka xabadka u saaro sidii oori ninkeeda soo dhaweyneysa oo kale, kuna muusoodo isagoo aad u faraxsan.
Halkaan ka akhriso mid ka mid warbixinnada laga qoray Afawerki.
Previous articleDagaalka Baydhabo oo Xoogeystay iyo Tangiyada Itoobiya oo magaalada Garaacaya (Video)
Next articleMukhtar Roobow oo Muqdisho la keenay iyo dagaal weli ka socda Baydhabo
Xog. Mooshin xil kaqaadis Madaxweyne oo laga diyaariyay Farmaajo.
Gen Odowaa oo Ciidamo udiray Balcad iyo Jowhar . Maxeey tahay...